Ranomafana – Polisy nitefaka ankizy saika novonoin’ny olona - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Ranomafana – Polisy nitefaka ankizy saika novonoin’ny olona Tweet
Manamboninahitra polisy iray no saika niharan’ny fitsaram-bahoaka tany Ranomafana Ifanadiana, ny alatsinainy hariva teo. Tsy nilamina ny toe-draharaha raha tsy niditra an-tsehatra ny zandary.
Araka ny loharanom-baovao azo avy any an-toerana dia « nitondra môtô io mpitandro ny filaminana io ary somary nandeha mafy, ka nahavoadona ankizy lahy iray 14 taona ».« Tezitra tamin’ilay loza niseho izy ka nidina teny ambony môtô ary avy hatrany dia namely tehamaina ilay zaza », hoy ny fitantaran’ny nanatri-maso.
« Voalaza fa efa tezitra aok’izany ny fokonolona teo an-toerana, fa tonga haingana ny zandary nandamina ary nitondra an’ilay polisy tany amin’ny biraon’izy ireo », hoy hatrany ilay loharanom-baovao.
Niaiky ny hadisoana vitany ilay mpitandro ny filaminana ka navelan’ny fokonolona nandeha ihany.
Polisy, Mpanoratra Rijakely, 29.08.2012, 08:25	FIARAHAMONINA